Danta Itoobiya ee Heshiiska DP World ee Dekadda Berbera! (Qorshihii Meles Zenawi) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Danta Itoobiya ee Heshiiska DP World ee Dekadda Berbera! (Qorshihii Meles Zenawi)
Danta Itoobiya ee Heshiiska DP World ee Dekadda Berbera! (Qorshihii Meles Zenawi)
March 4, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Waxaa todobaadkan si rasmi ah ay u Saxiixdeen Dowlada Itoobiya, Somaliland iyo Shirkada DP World mashruuca balaarinta dekadda Berbera kaasi oo ahaa mid muddo dheer soo socday wadahadalkiisa.
Sidaan ku sheegay Maqaalkii aan qoray [12kii Janaayo 2016], xiligaasi oo uu Madaxweynihii hore Somaliland Axmed Siilaanyo codsaday in dib loo furo wadahadalka Somaliland iyo Dowlada Federaalka ayaa qodobada ugu waaweyn waxa kamid ahaa Mashruucan dekadda Berbera. [Halkan ka akhrsio Maqaalkii 2016] si aad wax uga fahanto halka uu mashruucan salka ku hayo.
Itoobiya & EU
Dowlada Itoobiya ayaa sidoo kale sanadkii 2003, ka codsatay Midowga Yurub inuu gacan kasiiyo mashruucaasi Dekadda Berbera, halkan ka akhriso Warbixintii EU-da ee sahmintii kowaad ee mashruuca Berbera-Addis Ababa, waxaana sahmintaasi ka qeyb qaatay hay’ada fadhigeedu yahay dalka France [LOUIS BERGER S.A.] iyo AFROCONSULT oo ay xarunteedu tahay Addis Ababa, Itoobiya. [Halkan ka akhriso Warbixintaasi 2003]
Sida hada ku muuqata heshiiska kama danbeysta ah ee la saxiixay ayaa loo qeybsaday sidan; DP world (Imaaraatiga) 51%, Itoobiya 19% iyo Somaliland (30%). Taasi oo ka dhigeysa in mashruucan ay awooda ugu badan (Majority share holder) leeyihiin dalalka shisheeye ee Itoobiya iyo Imaaraatiga oo isku heysta (70%), halka Somaliland noqoneyso (Minority Share holder 30% oo kaliya).
Sultan Ahmed Bin Sulayem ayaa yiri “….Having the Government of Ethiopia as a partner will enable DP World to support the Government in achieving its impressive development plans…” [Halkan ka akhriso]
Hase yeeshee Somaliland awood badan uma yeelan doonto inay wax ka bedasho heshiiskan maadaam ay noqotay (Minority Share holder) go’aanada ugu muhiimsana ay hada ka go’ado Itoobiya iyo DP World.